I-Snapchat ibeka ubuso obutsha kunye nee-emoticon, zithetha ntoni? | Iindaba zeGajethi
I-Snapchat ihlaziywa ngophuculo olunomdla
UPablo Aparicio | | Iiselfowuni, Izaziso, I intanethi
Inkqubo yemiyalezo yangoku kunye «yabucala» I-Snapchat isandula ukuhlaziywa ngophuculo olunencasa, phakathi kwabo sifumana iibheji ezintsha zokuqonda ngcono abafowunelwa bethu, icandelo elitsha elibizwa ngokuba "Uthando Lufuna" (Uthando lweemfuno) kunye nemowudi yasebusuku yekhamera.
I-Snapchat ibisenziwa ngokutsala ngamandla mva nje, ukuqala xa bekucetyiswa ukubhloka abathengi benkampani yesithathu abaphule ngesiquphe ngobabalo lukaSnapchat lokukwazi ukunciphisa umda kulawulo oluthumelayo, zombini incoko kunye neefayile zemultimedia kwaye vumela (okanye vumela) ukugcina ezi fayile kunye nembali yencoko.
1 Intsingiselo yeempawu zeSpapchat
2 Ubuso boncumo
3 Ubuso boncumo
4 Ubuso ngezibuko zelanga
5 Ubuso obuncinci bujonge ecaleni
6 Intliziyo egolide
8 Ezinye izinto ezintsha zohlaziyo lukaSnapchat
Intsingiselo yeempawu zeSpapchat
I-Snapchat yaqala ukubhloka abathengi besithathu kudala, into ngokuqinisekileyo engabonwanga kakuhle ngabasebenzisi abaninzi. Mhlawumbi ukubuyekeza le ntshukumo, isicelo ngoku sahlaziywa phantse kunyaka ophelileyo ngeendaba ezinomdla. Phakathi kwezi zinto zintsha mhlawumbi bekukho enye ebalaseleyo ngaphandle kwezinye: ezinye Oo-smiley abatsha kwi-Snapchat ezimile njenge-emoji ezibonakala ecaleni kwengxoxo yokujonga kwangaphambili. Kodwa kuthetha ntoni obu buso buncinci kunye nezinye iisimboli? Ewe, nangona kunokwenzeka ukuba sele ubazi kwaye uyazi intsingiselo yabo, siza kukucacisela apha ngezantsi.
Ukuba sibona ubuso obunoncumo ecaleni komnye wabafowunelwa, oko kuthetha ukuba olu nxibelelwano omnye wabahlobo bethu abasenyongweni kwi-Snapchat, kodwa ayizizo ezona zilungileyo. Njengoko inye kuphela indawo ebekelwe okona kulungileyo, lo mhlobo unokuba ngowesibini, owesithathu okanye nangaphezulu, kodwa, ngaphandle kokuba siqhubeke nokuncokola naye kwaye sitshintshe i-icon yakhe siye kwintliziyo yegolide, .
Kwi-Snapchat sineentlobo ezimbini zobuso obunoncumo: olunobuqili ngakumbi apho umlomo ujijeke khona kwaye amehlo avalekile kwaye enye ichaza ngakumbi ngamehlo avulekileyo nalapho kubonakala khona amazinyo. Ukuba sibona okwesibini koku kuncuma ngaphezulu komnye wabafowunelwa, oko kuthetha ukuba umhlobo wethu osenyongweni u-1 ngowona mhlobo wakhe u-1.
Abukho ubuso obulula ukububona, kuba ukuba ndinomhlobo ogama linguVicente njengowona mhlobo wam usenyongweni, uVicente kufuneka abengumhlobo osenyongweni womhlobo wesithathu ogama linguAndrés, ke uVicente kufuneka abe nabahlobo babini abalungileyo inombolo yokuqala.
Ubuso ngezibuko zelanga
Ukuba sibubona ubuso ngezibuko zelanga ecaleni konxibelelwano lwethu, oko akuthethi ukuba olu nxibelelwano lukwindawo enelanga kakhulu, hayi. Oko kuthetha ukuba omnye wabahlobo bethu abasenyongweni ngomnye wabahlobo bakhe abasenyongweni. Umzekelo, ndinonxibelelwano ogama linguPepe ongomnye wabahlobo bam abasenyongweni (angangoyena ulungileyo, kodwa hayi ukuba loo mhlobo ngoyena ubalaseleyo kubo bobabini, ekukho nelinye i icon). Ndinomnye umhlobo kuSnapchat ogama linguJosé. Ewe, ukuba uPepe ngomnye wabahlobo abasenyongweni bakaJosé, ndiza kubona i-emoji yobuso enezibuko zelanga kwincoko kaJosé, uJosé uza kubona i-emoji yobuso enezibuko zelanga ngaphezulu kwencoko yam kwaye uPepe wayengaboni nayiphi na i icon okanye abone i inye eneendlela ezijonge ecaleni, esinentsingiselo esiyakuchaza kamva.
Ubuso obuncinci bujonge ecaleni
Le emoji isetyenziswa ngokubanzi kwiimeko ezininzi zendalo eyahlukileyo. Ingathetha into efana nokuthi "Ndikubonile", inokuthi "ewe, ewe ..." okanye nokuba uyamthanda umntu omthumelayo. Ngethamsanqa, kwi-Snapchat intsingiselo yayo icace gca: ukuba sibona ubuso bujonge ecaleni ecaleni konxibelelwano lwethu, oko kuthetha ukuba singumhlobo wakho osenyongweni, kodwa akangowethu. Umzekelo, ukuba ndithethile kakhulu nomhlobo wam uPepa kunye noPepa akaphindanga wathetha nomnye umntu kwakhona, siya kuba ngabahlobo bakhe abasenyongweni. Kodwa ukuba sine-Snapchatted more nomnye umntu, siya kuba nomnye okanye omnye umhlobo osenyongweni. Kule meko, siza kubona ubuso obujongeka njengokucela kukaPepa kwaye uPepa uza kubona ubuso obunoncumo.
Ukuba sibona intliziyo yegolide kwincoko yenye yabafowunelwa bethu, kucingelwa ukuba sinolwalamano oluhle kwi-Snapchat naloo mntu. Intliziyo yegolide ithetha ukuba thina Singumhlobo wakho osenyongweni ongu-1 kwaye laa mntu ngoyena mhlobo wethu usenyongweni unombolo 1. Bathi nabani na onomhlobo unobuncwane, akunjalo? Ewe, obo buncwane bumelwe kwi-Snapchat ngentliziyo yegolide emoji.
El icon yedangatye Singatsho sisebenzise intetho ye-Anglo-Saxon ukuba okwangoku "sisemlilweni" naloo mntu. Kwezemidlalo ezifana nebhasikithi, ngakumbi ukuba yi-NBA kuba idlalwa kwilizwe elithetha isiNgesi, xa umdlali edubula amatyeli aliqela elandelelana kwaye amanqaku, kuthiwa "usemlilweni", uguquko lwayo ngqo "ku" kodwa sisebenzisa igama elingaphezulu "ukuxhuma." Kwi-Snapchat, ukuba sibona amadangatye ngaphezulu kwencoko yomnye wabafowunelwa bethu, oko kuthetha ukuba "sixhunyiwe" ngalo mntu unxibelelana naye, ngengqiqo yokuba besikhe sathetha naye (imiyalezo ethunyelweyo neyamkelweyo) ngexesha iintsuku ezilandelelanayo. Ngokusengqiqweni, njengayo yonke imigca, idangatye liya kuphuma ukuba siyeke ukuncokola naloo mfowunelwa.
Ezinye izinto ezintsha zohlaziyo lukaSnapchat
Ukongeza kwiisimboli zeSnapchat esele sizichazile, kukwakho uphuculo kwikhamera kwaye ngoku Icrescent icon ecaleni kweflash switchUkucinezela kuya kwenza ukuba ikhamera yethu iphakamise ubuntununtunu be-ISO bokubamba iifoto ezicacileyo kwiimeko zokukhanya okuphantsi, nangona kufuneka sazi ukuba oku kukhokelela ekuphulukaneni nomgangatho kwisiphumo, kushiya ingxolo ngakumbi kumfanekiso:
Kwaye ekugqibeleni siya kuba necandelo elitsha elibiziweyo «Bafuna uthando» apho abafowunelwa baya kubonakala kulowo besikade simthumelela i-snaps kodwa ngenxa yaso nasiphi na isizathu siyekile ukuyenza.
Phakathi koku kunye nenqanaba elitsha likaSpapchat ukuvimba ukusetyenziswa kweqela lesithathu kwaye ke thintela ukuba ubumfihlo babasebenzisi bayo buchaphazelekile, usetyenziso kunye nenkonzo zithatha ikhosi elungileyo, kwaye sele zilungile ngempumelelo ekuthumeleni iifoto, ngokungafaniyo neWhappapp, aba bantu bayazi ukuba ukuba phezulu kuphethe uxanduva olukhulu, kwaye basebenza ngeempawu ezintsha ezisikhuthaza ukuba siqhubeke nokusebenzisa usetyenziso lwabo, amanqaku amatsha afakelwe kwezi zinikezelwe kutshanje, njengecandelo «Fumanisa», apho sinokubona khona amabali amancinci avela kumjelo owaziwa kwihlabathi liphela njengeNational Geographic.
Ngokubhekisele ekusebenziseni ii -apps zomntu wesithathu, nokuba ngubani ozama okwangoku, kunokwenzeka ukuba baya kufumana impazamo besithi khange ikwazi ukunxibelelana neseva, kwimeko yokungayifumani ngumcimbi kuphela Ixesha, i-Snapchat irhoxisa ukufikelela kwiiseva zazo ngolu hlobo lwezicelo ezingekho semthethweni, eziluncedo kuthi kakhulu.
Ukusukela ukuba ulwazi lwe-NSA lwe-spy lupapashiwe, singabasebenzisi abangakumbi nangakumbi abajonga ngakumbi imfihlo yethu. Ngokubhekisele kwizicelo zemiyalezo, nangona i-WhatsApp iqhubeka nokulawula le marike, besikade sikhangela iindlela ezisithembisayo (nangona benokusixokisa) inqanaba elikhulu labucala, njengeTelegram, esinye sezona zicelo zikhuselekileyo ziyafumaneka kulo naliphi na iqonga, okanye ngene, Esinye isicelo esikhuselekileyo esisibonelela ngemisebenzi enomdla kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Snapchat ihlaziywa ngophuculo olunomdla
Abasebenzisi beFowuni yeWindows baxhamla kakhulu ekuthinteleni izicelo zomntu wesithathu, ngakumbi ngenxa yokhetho abasinika lona ngokusemthethweni, oluthi AKUKHO nto kwaye abangahambi nakweyiphi na inkxaso yebango. Ukuhlazisa kunye nokungenzi kakuhle. Akukho CEO inokuthi ivumele inkampani yakhe ukuba isondele kwimarike, kwaye incinci kuleyo bayikhalelayo abasebenzisi bayo.
Ubuso obunamacala mhlawumbi kukuba nalo mntu sele uza kufumana intliziyo yegolide! UJ
Ubuso obujikeleze ecaleni buthetha ukuba loo mntu unabahlobo bakho abasenyongweni kwaye awunjalo!
Kutheni amanani esecaleni kwee-emoticon?
Ndiyakholelwa, njengoko uAna esitsho, ukuba icala elisecaleni ngumntu onazo njengabahlobo bakho abasenyongweni kwaye awunayo.
Ngokutsho kwam, ubuso obusecaleni kuxa uthatha izikrini zomnye umntu ...
Athetha ntoni amanani?
Ubuso obujongeka njengokucela buthetha ukuba ungumhlobo wakhe osenyongweni kodwa akangowakho !!!
amanani athetha ukuba
Buthetha ntoni ubuso obuncinci obubonisa omabini amacandelo amazinyo ????? <—— esaaa !!
Ubuso be ???? Ingaba ithetha ntoni?
Kwaye kuthetha ntoni ubuso obugwebileyo?
Ubuso obujonge ecaleni buthetha ukuba umntu unawe phakathi kwezintandokazi zakhe kodwa awunaye loo mntu phakathi kwezintandokazi zakho
Enkosi kakhulu nonke ngentsebenziswano yenu, ndihlaziye ungeniso olusekwe kwinto yokuba kukho abantu abaliqela abahambelana nentsingiselo, eyenza ukuba ndikholelwe ukuba iyinyani (kwaye njengoko ndibonile ukuba iyinyani kubomi bokwenyani, iqinisekisiwe).
Okokugqibela ndiye ndabona ukuba ubuza ngobuso obutsha, inyani kukuba andikaze ndibabone, ukuba ungathumela umfanekiso-skrini ndiza kuqala ukuphanda ngawo, ungalibali ukwaba inqaku, kungenganto, kodwa kuba Ndaba ngowokuqala Nje ukuba ndibabone ndilahlekile ngandlel 'ithile, kwaye oku kunokunceda abantu bazi ukuba ungantoni na lo mbuliso, umbuliso oshushu kubo bonke abafundi abenza ukuba umsebenzi wethu ubekho! 😀
Ndifuna ukupapasha ifoto malunga nobuso endandikuthandabuza kodwa andikwazi okanye andazi ukuba ndiza kuyipapasha njani
Enkosi kakhulu ngokufuna ukufaka igalelo ^ ^ ukufaka ifoto onokuyilayisha ku- "http://www.imgur.com/" kwaye kamva uthumele ikhonkco kuyo apha, ngethamsanqa!
Athetha ukuthini amanani ?????
Andiyifumani inyanga kuba kwaye iividiyo ziba mnyama ngaphandle kokufuna kwam
Kwabo babuza malunga nobuso obuncumileyo kwaye buhlwili kuthetha ukuba loo mntu ngoyena mhlobo mhle mhlobo wakho osenyongweni.
UKellymar Perez Ramirez sitsho
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba obu buso bukwi-snap?
Ngaba ukhona umntu onokuthi amanani athetha ntoni?
Ubuso obuncinci bamazinyo? kuthetha ukuba babelana ngomhlobo ofanayo # 1
? zombini ezi # 1 zezinye
? bane # 1 umntu omnye
? Abahlobo abasenyongweni
? yabelana ngomhlobo osenyongweni
? ukubahlobo bakhe bokwenene kodwa akakho kowenu
? bathetha incoko rhoqo
Ndenza njani ukuba icrescent ivele ecaleni kweflash? Umntu othile undixelele ukuba ndenze njani!?
Ndiyenza njani into yokuba isiqingatha se-luma sandibamba kwi-snapchat.
Amanani ayakuba ziintsuku obukade uthetha ngazo ... yiyo loo nto bephuma ecaleni komlilo 😉
Ithetha ntoni isikwere sencoko engwevu?
Kwaye intliziyo ebomvu?
Kutheni le crescent ingaveli ecaleni kwesibane esikwi-snapchat yam?
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba yeyiphi i-icon engwevu ??
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba umyalezo othunyelwe ngumqondiso uthetha ntoni kodwa ngombala ongwevu?
Ungumqhubi wemoto yakho, hayi iGPS
Sijonga inkqubela phambili yeProjekthi Spartan